Video Resizer maka Mavericks: Olee otú Resize Video on OS X Mavericks
> Resource> Video> Video Resizer maka Mavericks: Olee otú Resize Video on OS X Mavericks
Mgbe ụfọdụ, i nwere ike ịhụ gị nha ihuenyo vidiyo bụ oke ibu na-uploaded YouTube na Facebook, ma ọ bụ na ị chọrọ ka me a obere video jupụta gị nnukwu ileba anya. Ya mere, ị pụrụ ịdị mkpa ka resize ya na-agbanwe na ihuenyo mkpebi.
Iji resize video on Mac si ọhụrụ sistemụ OS X 10,9 Mavericks, ị nwere ike ma ịgbanwe nha ihuenyo vidiyo na usoro ma ọ bụ ihe ubi gị video. N'agbanyeghị ihe oke ị na-eme, ị nwere ike iwunye Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac). Nke a video resizer maka Mavericks-enyere gị iji hazie ihe video ntọala site onwe gị anya na i nwekwara ike ịzọpụta gị video iche iche formats, si otú ị nwere ike mfe resize gị videos. Na nke a nkuzi, ka anyị hụ otú i nwere ike resize gị video on Mavericks.
1 Wụnye a video resizer maka Mavericks ma tinye gị faịlụ ka ọ
Download na wụnye video resizer maka Mavericks, na-aga Njikwa> Tinye Files na họrọ faịlụ site na media nchọgharị. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ na dobe gị faịlụ ka usoro iheomume.
2 Resizing video site na-agbanwe video mkpebi ma ọ bụ usoro
Ndị kasị dị irè na mfe ụzọ resize a video bụ ịgbanwe video mkpebi. Nke a nwere ike mfe a ga-enweta site na Video Editor. Mgbe importing gị faịlụ ka usoro ihe omume, ozugbo see "Export" bọtịnụ na n'akụkụ aka nri nke toolbar na-aga "Format" taabụ. Ị nwere ike pịa Format ndepụta ma họrọ a kwesịrị ekwesị usoro. Ma ọ bụ ịgbanwe ntọala nke mkpebi, etiti ọnụego, bit ọnụego, encoder, sample ọnụego, wdg ka ihe atụ, site na-agbanwe mkpebi na-320x240 mkpebi, ma belata video etiti ọnụego 15 fps, a FLV video nke banyere 3 nkeji ga-exported na-18MB FLV faịlụ. Ezughị? Lower bit ọnụego na / ma ọ bụ etiti ọnụego iji nweta a nta mmepụta faịlụ ọ bụrụ na gị isi iyi video bụ ogologo oge.
3 Resizing vidiyo site cropping
Ụzọ ọzọ na-resize a video faịlụ bụ ubi ya. Ime ya, mata lekwasịrị video faịlụ na pịa "n'Ubi" button. Mgbe ahụ edezi window ga-gbapụta n'ihi na ị na ubi videos. Ebe a na-3 nhọrọ maka gị: aka họrọ marquee, na-marquee na 16: 9 ma ọ bụ 4: 3 akụkụ redio. Họrọ a na-achọsi ike ụzọ ubi gị videos.
4 mbupụ gị video
N'agbanyeghị nke ụzọ ị na-ahọrọ, pịa "Export" mgbe ahụ "Mepụta" ịzọpụta gị faịlụ. Video Editor Ga rụchaa ndị fọdụrụ-akpaghị aka.
Ugbu a ibudata a video resize maka Mavericks na ịchọpụta ihe video edezi ọrụ!
I nwekwara ike na-ekiri ndị video nkuzi:
Olee otú m nwere ike ịgbanwe The Video si ụba Rate?